Farmaajo oo iska hor keenay Xildhibaanno isku heyb ah | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo iska hor keenay Xildhibaanno isku heyb ah
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, ayaa soo abaabulay Xildhibaanno ku heyb ah Taliye Saadaq Joon, si ay ugu jawaabaan xildhibaannadii tagay Xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan, waxayna taasi dhalisay in labada dhinac saxaafada isku marsiiyaan hadallo adag..
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ‘Odawaa’ iyo Xildhibaan Mahad Maxamed Salaaad, oo ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka, ee watigoodu dhamaaday ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu qaar ka mid ah Xildhibaanadda Golaha u adeegsado in ay faafifiyaan barabagaando, si loo qaldo bulshada.
“Markii kulaylku gaaro waxa uu ka soo dhax hadlaa kuwa dad kuu xiga, xalay kuwo aan qaraaba nahay ayuu ka soo dhax hadlay, haddii ay dadka matalaan may meesha ay dadku joogaan ka so dhax hadlaan waa kuwa ina Farmaajo agtiisa laga so shidaaye sida cajalade.” Ayuu yiri Xildhibaan Odawaa.
Xildhibaan Mahad Salaad, ayaa isna yiri, “Xildhibaanada Farmaajo xalay kasoo dhex hadlay ee afarta sano uu biilka siinayay walina u heysta in uu noolyahay ama uu ka matajin karo wixii ay ka cuneen hadii ay warkiisa diidaan walaaleyaalow haloo cudurdaaro. Sababtoo ah dadna Farmaajo ayaa u ah duunyana waa mida ay gacantiisa ka sugaan.”
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya, iyo Wasiir Dowlihii hore ee Madaxtooyada, ayaa ka jawaabayay, hadal ka soo yeeray Xildhibaanno ay isku heyb yihiin, kuwaas oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Madaxtoyada, si weyna ula dhacsan habka uu wax u wado Farmaajo.
Xildhibaannada kala ah, Ubax Tahliil, Warsame Joodax, Cabdicasiis iyo Maxamed Cabdulle, ayaa si adag u dhaleceeyay xubnihii tagay Xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan, waxayna ku tilmaameen qaswadayaal.
Layaabka, ayaa noqday, kadib markii Xildhibaan Warsame Joodax, uu xalay fiidkii hore tagay guriga uu deggan yahay Saadaq Joon, isagoo xilligaa sheegay inuu yahay xaq u dirir, halka labo saac kadib oo ka soo muuqday shirkii jaraa’id ee Madaxtooyada, islamarkaana uu ku tilmaamay qaswade.
Dhanka kale, shirka jaraa’id ee Xildhibaannadan ayaa bannaanka keenay, habka ay Dowladda Fadaraalku, u abaabusho kulamada ceyn kaan ah, waxaana Kaamirooyinku duubeen, Xildhibaanadda oo Wasiir ku xigeynka Wasaaradda Warfaafinta weydiinaya waxa ay sheegi lahaayeen, weydiisanayaanna in uu waraaq u soo qoro.
Wasiir Al-Caddaala ayaa ugu jawaabaya, Qoraal taleefanka gacanta lagu soo diry, “ Hal qof ha aqriyo kadibna kuwa kale ha kabeen”. itaas kadib Xildhibaan Ubax tahliil ayaa dhaheysa “Aniga ayaa aqrinaya”.